Diyaarado Dagaal oo Duqeeyey Gedo iyo Jubada Hoose iyo Alshabaab lagu Bartilmaamaystay (dhegayso) – Radio Daljir
Diyaarado Dagaal oo Duqeeyey Gedo iyo Jubada Hoose iyo Alshabaab lagu Bartilmaamaystay (dhegayso)
Luulyo 16, 2017 5:14 g 0
Duleedka Kismaayo waxaa ka dhacay duqayn diyaaradeed oo cirka ah oo la sheegay in uu ahaa Mareykanka. Diyaaradahan ayaa duqeeyay saldhigyo ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo Al-shabaab ah iyo ajniib isugu jiray.
Hawlgalkan ayaa la soo sheegayaa in ay iska kaashadeen ciidamo Mareykan ah iyo ciidamada DFS.
Sidoo kale waxaa duqayntaas mid lamid ah ay ka dhacday degmada Garbahaarey ee gobolka Gedo.
Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni waa guddoomiyaha Gobolka Jubada Hoose wax uuna u waramay wariye Xasan Heykal.
Diyaarado duqeeyey Caluula (dhegayso) Hadalhaynta Saaka iyo Diyaarado Dagaal oo Garoowe Dulmaray, (Sawirro) Soomaali lagu Duqeeyey Yemen oo Gaarey Berbera iyo Qorshaha Soomaaliland (dhegayso) Taliye Cabdi Axmed Xaashi: “Alshabaab waxay Heshiis Hoose Leeyihiin Soomaalilaan” (dhegayso)